Charles Dickens. Bhavhudhe remukuru wezana ramakore rechiXNUMX munyori wechiRungu | Zvazvino Zvinyorwa
Charles Dickens. Bhavhudhe remukuru wezana ramakore rechiXNUMX chinyorwa cheChirungu
Zvatove 206 makore kubvira iyo 7 yeFebruary kubva 1812 zvichienda mberi Portsmouth ona mwenje Charles Dickens, pamwe anonyanya kukosha wezana ramakore rechiXNUMX munyori wenhau weBritish. Inosara zvakare mumwe wevanyori vakakurumbira vezvinyorwa zvepasirese. Saka zvinogara zvakanaka kupemberera zuva rako rekuzvarwa nekurangarira zvirevo izvozvo nezvidimbu kuti tese takaverenga pane imwe nguva.
Dickens (1812-1870) yainge yatove hunhu mumanovel ake. Akazvarwa muhurombo aive ne mubereki anonetsa uye kusvika zera ramakore mapfumbamwe aisakwanisa kutanga chikoro. Chii chimwe, aishanda mufekitori zvakare achiri mudiki uye zviitiko izvi zvakabva zvanangidzira mabhuku ake pa urombo, kusaruramisira uye mhosva. Akarwirawo kubvisa kushandiswa kwevana uye nemamiriro ezvinhu evakadzi panguva iyoyo.
Akanyora 15 enganonyorwa, 5 enganonyorwa pfupi uye mazana e nyaya pfupi y zvinyorwa venhau. Maitiro ake anosimbisa iyo picaresquela kugadzirwa kwemitauro and the kutevedzera, hunhu hunoratidzwa nechaunga cheVictorian. Mukurangarira kwake enda wongororo iyi yebasa uye mazwi.
1 Krisimasi nhau
2 Nhoroondo yemaguta maviri
3 Imba yakaparadzwa
4 Nguva dzakaoma
5 Tariro huru
7 Mamwe emitsara yake
«Aitaridzika kunge akura, akange atove murume munguva yehupenyu. Chiso chake hachisati charatidza kuomarara uye hutsinye zvemakore apfuura, asi zviratidzo zvemakaro uye kunetseka zvaive zvatotanga kuratidza. Aive aine huso hwakasviba, makaro, kusagadzikana kwakaratidza kushushikana kwainge kwakadzika midzi mumaziso ake uye kune divi remumvuri wemuti uyo wanga uchikura rosy waizowira ».
Nhoroondo yemaguta maviri
«Yaive nguva dzakanakisa, yaive nguva dzakaipisisa, zera rehungwaru, kutenderera kweupenzi, danho rekutenda, danho rekusatenda, mwaka weChiedza, iyo nguva yemimvuri, yaive tsime retariro, iyo nguva yechando yekupererwa, isu tanga tine zvese pamberi pedu, pakanga pasina kana chinhu pamberi pedu ».
«Katsi yadzokera kumusuwo, uye yava kupururudza; kwete kwavari, asi kune chimwe chinhu chiri pasi pamberi pechoto. Moto mudiki kwazvo unosara, asi mune gobvu, inodzipa mweya mumba, uye jira rakasviba, rine mafuta rinosvibisa madziro nedenga. Bhachi remukweguru nekapu zvakarembera pacheya. Tambo tsvuku yakasunga mavara aya iri pasi, asi hapana bepa rinoonekwa, kungori dema dema ndokurasa pasi.
“Raive guta rezvidhina zvitsvuku, ndiko kuti, chidhinha chingadai chakatsvuka dai utsi nedota zvabvumidza izvozvo; sezvo zvainge zvisina kudaro, guta raive neruvara rutsvuku-dema, rakafanana neiro raishandiswa nevarume kuzora kumeso kwavo. Raive guta remamachina uye ma chimney marefu, maibuda nyoka dzisingaperi dzeutsi dzakange dzisingapedze kumisikidza, kunyangwe kubuda nekubuda pasina kukanganiswa ».
“Izvo zvaisakanganwika kwandiri, nekuti zvakaita kuti ndichinje nenzira hombe. Asi izvo zvinogara zvakadaro mune chero hupenyu. Fungidzira kuti chero zuva rakapatsanurwa kubva kwariri, uye funga nezvekuti nzira yehupenyu ihwohwo ingadai yakave yakasiyana sei Zviri nyore kuti muverengi ambomira achiverenga izvi, uye ofunga kwekanguva nezveketani refu resimbi kana goridhe, yeminzwa kana yemaruva, izvo zvaisazombomukomberedza kunze kwekutanga kwekubatanidza kwakaumbwa muzuva risingakanganwike. ".
"Dai mumwe munhu akange andiudza ipapo kuti zvese izvi hwaive mutambo wakajeka waitamba mukunakidzwa kwechinguva kukanganisa mweya wake muchishuwo chekuratidzira ukuru hwake uye kuti akunde kwekanguva kamwe izvo zvaaizosiya zvinotevera; Ini ndinoti kana mumwe munhu akange andiudza nhema dzakadai husiku ihwohwo, handizive chandingadai ndakakwanisa kuita mukutsamwa kwangu.
Hapana munhu anorerutsa huwori hwevamwe haabatsiri pasi rino.
Moyo une rudo ndiwo uchenjeri hwechokwadi.
Isu tinogadzira ngetani dzatinopfeka muhupenyu hwedu hwese.
Hatimbofaniri kunyara nemisodzi yedu.
Iwe unoonekwa mumitsara yese yandakaverenga muhupenyu hwangu.
Kune tambo mumoyo wemunhu izvo zviri nani pane kusambodedera.
Mufambi wese ane imba, imba yaanodzidza kuda zvakanyanya mukati merwendo rwake.
Hapana chinhu munyika chinotapurika nekusadzivira sekuseka uye kuseka kwakanaka.
Kutendeuka kunowanzoitika kune avo vanosanganisa vhudzi rakachena.
Mhuri haisi ivo chete vatinogovana navo ropa, asiwo avo vatinoteurira ropa redu.
Usambofa wakavimba nechitarisiko, asi humbowo. Hakuna mutemo wakanaka.
Hapana kuzvidemba kunogona kutsiva mikana yakarasika muhupenyu.
Kana murume akadeura ropa mukati, zvine njodzi kwaari, asi kana achiseka mukati, inongedzo yehumwe huipi kune vamwe.
Kuvanza chimwe chinhu kune avo vandinoda hakusi muhunhu hwangu. Ini handigone kuvhara miromo yangu kwandaka vhura moyo wangu.
Hapana chinhu chakasimba kana chechokwadi panguva yedambudziko muhupenyu sechokwadi.
Kune mabhuku ane kumberi uye kumashure mabutiro ari nekure chikamu chakanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Charles Dickens. Bhavhudhe remukuru wezana ramakore rechiXNUMX chinyorwa cheChirungu
Hogarth Shakespeare Chirongwa. Vanyori vakakura vanovhara mabasa aShakespeare
James Ellroy, Pepe Carvalho Mubairo paBCNegra. Iyo Mad Imbwa uye ini